Zvese zvaunoda kuti uzive nezve ecosphere | Green Renewables
Mune zvimwe zvinyorwa zvatataura nezvazvo iyo lithosphere, iyo biosphere, hydrosphere, muchadenga, nezvimwe. uye zvese zvayakaita. Kutsanangura zvakanaka nzvimbo dzese dzePasi nekushanda kweimwe neimwe, nzanga yesainzi inogadza mimwe miganho. Panguva dzinoverengeka tinotaura nezve ecosphere, kunyange hazvo isati yanyatso tsanangurwa uye kugadziriswa maererano nezvazvinogona kusanganisira.
Ecosphere inotsanangurwa se mamiriro epasi rose epasi, yakaumbwa nezvose izvi zvipenyu zviripo mune biosphere uye hukama hwakagadzwa pakati pavo nemamiriro ekunze. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve hunhu uye kukosha kweiyo ecosphere?
1 Tsananguro yemuchadenga chii icho?
4 Musiyano uripo pakati biosphere uye ecosphere
5 Yakakosha sisitimu yakagadzirwa neNASA kuti inzwisise ecosphere
6 Kupfuura iyo miganhu ye ecosphere
Tsananguro yemuchadenga chii icho?
Tinogona kutaura kuti ecosphere iri huwandu hweiyo biosphere pamwe nekugona kwayo kudyidzana nemhoteredzo. Mune mamwe mazwi, iyo biosphere yaisanganisira nzvimbo yese yePasi inogarwa nevanhu vapenyu, asi haina kufunga nezvekudyidzana kuripo pakati pezvipenyu izvi nemhoteredzo. Ndokunge, kuchinjaniswa kwemajini pakati pevanhu vemhuka nezvirimwa, maketani trophic ezvisikwa, basa iro muviri wega wega unenharaunda mune dzimwe mhuka, hukama pakati peabiotic uye chikamu chebiotic, nezvimwe.
Iyi pfungwa yezvemuchadenga yakanyatso nzwisisika yepasi rose, nekuti nekuda kwayo zvinokwanisika kunzwisisa kubva kune yakajairika nzira yatingadaidze. mamiriro epuraneti inoumbwa neiri pamusoro inonzi, geosphere, biosphere, hydrosphere nemuchadenga. Mune mamwe mazwi, iyo ecosphere yakafanana nekudzidza kweese mamwe masisitimu epasi rese nekudyidzana kwavo pakati pawo.
Nekuti zviyero zve ecosphere zvakakurisa, zvinogona kuganhurirwa mumadiki mashoma kuita kuti iverenge kudzidza. Tinofanira kujekesa kuti kunyangwe hazvo vanhu vachipatsanura nekuisa masisitimu ehupenyu kuitira kuti vanzwisise mashandiro avo, kuvachengetedza nekuvashandisa, ichokwadi kuti zvisikwa izere uye kuti pane kuwirirana kunogara kuripo pakati pezvose zvakasikwa zvinoumba izvo zvinonzi ecosphere.
Sezvatakambotaura, mune zvisikwa zvepasi rese zvipenyu zvinodyidzana zvakananga kana zvisina kunangana. Semuenzaniso, kana zvirimwa photosynthesize, zvinotora CO2 uye zvinoburitsa okisijeni yakakosha kune hupenyu hwezvimwe zvipenyu. Mumwe muenzaniso mune iyo abiotic chinhu senge mvura inopindira ndiyo hydrological kutenderera. Mune ino kutenderera, mvura inofamba mukuita kwakakosha kune hupenyu papuraneti. Kutenda kufamba uku kwemvura uye nemupiro unopfuurira kuzvisikwa, mamirioni ezvisikwa anogona kurarama papasi redu.
Iko kudyidzana uko kune zvipenyu zvese, zvese pamwe nemumwe uye neabiootic zvinhu (senge mvura, ivhu kana mweya) zvinoita kuti tione kuti zvidimbu zvese zvepikicha zvakakosha kuti zvigare paPasi. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti isu tiedze kudzikisira kukanganisa kunoitwa nevanhu pasirese, nekuti chero kukuvadzwa kwaunotarisana nako kunozova nemhedzisiro pane zvimwe zvese zvinhu zvinoumba ecosphere.
Kana tichitaura nezvese zvipenyu tine kusiyana kukuru kwemarudzi ezvisikwa. Kutanga isu tine zvipenyu zvinoburitsa. Izvi zvinodaidzwa kuti maototrophs, ndiko kuti, ivo vanokwanisa kugadzira chikafu chavo kuburikidza nemvura, carbon dioxide uye mamineral salts. Kuti vagadzire chikafu chavo pachavo vanoda simba remwaranzi yezuva. Zvirimwa - autotrophic zvipenyu.
Aya ekupedzisira ari kudya zvipenyu, zvinonzi heterotrophs, izvo zvinodya zvipenyu zvinhu zvinogadzirwa nezvimwe zvipenyu. Mune maheterotrophs tinogona kuwana mhando dzinoverengeka dzekupedza zvisikwa:
Vatengi vekutanga. Ndeavo vanongodya huswa, hunozivikanwa sehuswa.
Vatengi vechipiri. Idzo idzo mhuka dzinodya dzinodya nyama yedzinomera.
Vatengi vepamusoro. Vanodya pane izvo zvipfuyo zvinodya kune dzimwe mhuka dzinodya.
Vanoparara. Dzinoshanduka kuve idzo heterotrophic zvipenyu izvo zvinodya pane zvakafa zvisikwa zvinhu zvinobva kune zvakasara zvezvimwe zvipenyu.
Musiyano uripo pakati biosphere uye ecosphere
Kune rimwe divi, iyo biosphere, uko izvi zvipenyu zviripo, inotambanuka kubva pasi penyanza kusvika pamusoro pegomo rakakwirira kwazvo riripo, zvakare inosanganisira chikamu chemuchadenga, troposphere, iyo hydrosphere uye chikamu chepamusoro cheiyo geosphere ndiko kuti, biosphere, sezvazvinoitika, inzvimbo yepasi inowanikwa hupenyu.
Nekudaro, kune rimwe divi, iyo ecosphere haisi iyo chete nzvimbo inowanikwa hupenyu nekupararira, asi inodzidza hukama hwese huripo pakati pezvipenyu izvi. Kuchinjana kwechinhu nesimba pakati pezvinhu zvipenyu uye nharaunda zvakanyanyisa kuomarara. Kuti pave nekuwirirana mune zvipenyu nezvisikwa zvipenyu panguva imwe chete, panofanirwa kunge paine zviwanikwa zvekuchengetedza vanhu, zvikara zvinodzora huwandu hwevanhu vemarudzi ese, zvipuka zvine mukana, muyero pakati pezvipukanana nezvakabata, hukama hwehukama, nezvimwe. .
Imwe neimwe ecosystem ine chiyero checological zvichienderana nehuwandu hwevanhu, zviwanikwa nezviitiko zvemamiriro ekunze zvinoitika. Iyi ganho rezvakatipoteredza rave rakaoma kwazvo kudzidza nekunzwisisa, sezvo paine misiyano mizhinji inoshanda muyero iyi isina kusimba. Mamiriro ekunze emamiriro ekunze ndeaya anotara huwandu hwemvura inowanikwa mune ecosystem, huwandu hwemvura, zvakare, hunoita kuti kukura kwezvirimwa, izvo zvinotsigira vanhu vezvikara, zvinova zvinoshanda sezvandinopa nyama dzinodya nyama. uye vanosiira zvisaririra kune zvinoora uye zvinokanganisa.
Iyi cheni yese yezvikafu "yakasungirirwa" kune mamiriro aripo munzvimbo yega yega uye panguva yega yega, saka kana paine chinhu chinoita kuti zviyero zvese zvisiyane, ecosystem inogona kukonzera kusagadzikana. Semuenzaniso, icho chinhu chinoita kuti kusaenzana kwemamwe misiyano ive chiito chemunhu. Kuramba kuchikanganisa kwemunhu pane zvakatipoteredza kune zvese abiotic uye biotic zvinhu kuri kuchinja zviyero zvezvisikwa, zvichiita kuti zviomere zvipenyu zvakawanda kurarama uye zvichitungamira mukutsakatika kwemamwe akawanda.
Yakakosha sisitimu yakagadzirwa neNASA kuti inzwisise ecosphere
Kuti unzwisise chiyero chemagariro chiripo mune zvipenyu, NASA yakagadzira kuyedza. Igirazi regirazi rakavharidzirwa, mune iro algae, mabhakitiriya uye shrimp inorarama, neimwe nzira, nyika yakakwana yesainzi, iyo, pamwe nechengetedzo inoenderana, inogona kurarama pakati pemakore mana kusvika mashanu, kunyangwe paine zviitiko zvekuti hupenyu hwakatora kwemakore gumi nemasere.
Iyi yakasarudzika sisitimu yakasikwa kuti inzwisise chiyero chinotonga masisitimu uye izvo zvinoumba kuwirirana kuitira kuti zvese zvipenyu zvigare mairi nekuzvipa pachavo zviwanikwa zvisine kusazvipedza.
Pamusoro peiyi pfungwa yekunzwisisa kuyananiswa kwezvakatipoteredza, ino sisitimu yakagadzirwa kuti iwane dzimwe nzira dzekutakura zvakakwana zvipenyu zvezvisikwa kumapuraneti ari kure nePasi mune ramangwana, kufanana nemars.
Mvura yegungwa, mvura yegungwa, algae, mabhakitiriya, shrimp, mavhu akaunzwa muzai. Biological chiitiko chinoitika uri wega nekuti zai rakavharwa. Iyo inongogamuchira mwenje kubva kunze kuchengetedza iyo yehupenyu kutenderera.
Neprojekti iyi unogona kuve neruzivo rwekuve nenzvimbo inoshanda kusangana nezvinodiwa zvekudya, mvura nemhepo kuitira kuti vagadziri vasvike kune imwe nyika zvakanaka. Nekudaro, mune ino pfungwa, NASA inoona iyo ecosphere senyika diki yepasi uye shrimp inoshanda sevanhu.
Kupfuura iyo miganhu ye ecosphere
Nekuda kwekuyedza uku, zvaive zvichikwanisika kuti unzwisise musiyano wezvakatipoteredza uye kuti, chero bedzi miganho ichiremekedzwa, panogona kuve nerunyararo uye zvese zvipenyu izvo nzvimbo inotsigira zvinokwanisa kurarama. Izvi zvinofanirwa kutibatsira kuti tizive kuti, papasi redu, miganho yezvisikwa iri kupfuudzwa, sezvo misiyano yezvakatipoteredza iri kuwedzerwa.
Kuita kuti kunzwisiswe kwemiganhu iyi kuti ecosphere iite nyore zvishoma, isu tinofanirwa kufunga kuti ecosystem ine zvigaro zviwanikwa uye yakaganhurirwa nzvimbo. Kana tikapinza mhando dzakawanda munzvimbo iyoyo, dzinokwikwidza zviwanikwa nenharaunda. Mhando dzinobereka uye dzinowedzera huwandu hwadzo uye huwandu hwevanhu, saka kudiwa kwezviwanikwa uye ivhu zvichawedzera. Kana zvipenyu zvepakutanga nevatengi vepamoyo vachiwanda, zvikara zvinowedzerawo.
Aya mamiriro ekuenderera kukura haagone kuenderera nekusingaperi munguva, sezvo zviwanikwa zvisinga peri. Kana zvipenyu zvikapfuura kugona kwenzvimbo dzekudyara nekuchengetedza zviwanikwa, zvipenyu zvinotanga kudzikisa huwandu hwazvo kusvikira zvasvika pakuenzana zvakare.
Izvi ndizvo zviri kuitika nemunhu wenyama. Tiri kukura pamwero wakawedzera uye usingamiswe uye tiri kudya zviwanikwa pachiyero icho nyika isina nguva yekumutsiridza. Iyo ecological muyero wepasi yakagara kare yakapfuurwa nevanhu uye isu tinogona chete kuedza kuzviita zvakare nekutungamira zvirinani uye nekushandisa zvese zviwanikwa.
Tinofanira kurangarira kuti isu tine chete mapuraneti uye kuti zviri kwatiri kugara pairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Iyo ecosphere